eParewa || Peace and Prosperity » चर्चामा रहेका र ब्यस्त नायकका फ्लप चलचित्र
चर्चामा रहेका र ब्यस्त नायकका फ्लप चलचित्र
२०७५ चैत १८ गते सोमबार ०३:१८
धमाधम चलचित्रमा काम गरिरहेका छन् । वर्षमा ३ देखी ४ वटासम्म चलचित्र प्रर्दशन भएका छन् । देश विदेशका कार्यक्रममा उनिहरुकै राज छ । विभिन्न बिज्ञापनमा उनिहरुकै हानिमुहाली छ । आफुले कस्तो खालको चलचित्रमा काम गर्नुपर्छ र चलचित्रमार्फत...
धमाधम चलचित्रमा काम गरिरहेका छन् । वर्षमा ३ देखी ४ वटासम्म चलचित्र प्रर्दशन भएका छन् । देश विदेशका कार्यक्रममा उनिहरुकै राज छ । विभिन्न बिज्ञापनमा उनिहरुकै हानिमुहाली छ । आफुले कस्तो खालको चलचित्रमा काम गर्नुपर्छ र चलचित्रमार्फत आफुले के सन्देश दिने हो भन्ने समेत कलाकारहरुलाई हेक्का छैन । दामको लोभमा जस्ता पायो त्यस्तै चलचित्र गर्ने बानी परेको छ नेपाली अभिनेता–अभिनेत्रीहरुलाई । हिट कलाकार भनेर जुन नाम पाएका छन्, नामजस्तै काम भने दिन सकेका छैनन् । नेपालमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेका र ब्यस्त कलाकारहरुले कति फ्लप चलचित्र दिएका छन् त ? छोटो टिप्पणी :
अहिलेका हिट अभिनेता हुन् प्रदीप खड्का । प्रदिपको फ्यान फलोइङ निकै लोभलाग्दो छ । छोटो समयमा धेरै चर्चामा आएका यि अभिनेताले केहि चलचित्रबकाट असफलताको स्वाद चाख्नुप¥र्यो । सन् २०१४ मा ठूलो मान्छे नामको चलचित्र निर्माण गरेर चलचित्र क्षेत्रमा आएका प्रदिपले सन् २०१५ मा प्रदर्शन भएको चलचित्र स्केप मार्फत अभिनयमा डेब्यु गरेका हुन् । प्रदर्शन हुन बा“की चलचित्रलाई छोडेर हेर्नेहो भने उनी अभिनित ५ चलचित्र प्रदर्शन भए । स्केप, प्रेमगीत, प्रेमगीत २, लिलिबिलि र रोज । यि मध्ये चलचित्र स्केप र रोज प्रदीपको करिअरमा फ्लप चलचित्र हुन् । उनको नयाँ चलचित्र लभ स्टेसन सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । यो चलचित्रबाट भने प्रदीपले राम्रै आशा गरेको बताए ।
चलचित्र होस्टेलबाट चलचित्र क्षेत्रमा अभिनेताको रुपमा हाम फालेका अनमोल केसीले पनि केहि चलचित्रबाट असफलताको स्वाद चाख्नुप¥र्यो । यथार्थ र बास्तविक फरक कुरा हुन् । अनमोलले मुख्य भुमिकामा काम गरेका चलचित्र होस्टेल, जेरी, गाजलु, ड्रिम्स, कृ, क्याप्टेन हुन् । ए मेरो हजुर ३ सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । उनले काम गरेका चलचित्रमध्ये गाजलु, कृ, क्याप्टेन असफल चलचित्र लिस्टमा छन् । निर्माण पक्षले क्याप्टेनबाट भने लगानी सुरक्षित भएको दाबी गरेको छ ।
अभिनेता पल शाहले अभिनय गरेका चलचित्र नाई नभन्नु ल ४, जोनी जेन्टलम्यान, म यस्तो गीत गाउँछु, सत्रुगते सार्वजनिक भए । उनको नयाँ चलचत्रि विर विक्रम २ सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । पलले काम गरेका चलचित्रको हिसाब किताब गर्नेहो भने जोनी जेन्टलम्यान नराम्रोसँग चिप्लियो ।
अभिनयका हिसावले विपीन कार्कीको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा खुबै चर्चा हुने गर्छ । उनले पछिल्लोपटक काम गरेको चलचित्रले प्रसादले उनलाई फेरि पनि एकपटक अब्बल कलाकारको रुपमा प्रमाणित गरेको छ । विपीनले अहिलेसम्म काम गरेका चलचित्र लुट, छड्के, दाण्डव, सुन्तली, कालो पोथी, पशुपति प्रसाद, जात्रा, लुट २, नाका, लालपुर्जा, हरी, प्रसाद, गोपी र जात्रैजात्रा हुन् । जात्रैजात्रा भने सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । विपीनले काम गरेका चलचित्रमध्ये छड्के, दाण्डव, सुन्तली, नाका, लालपुर्जा, हरी, गोपी फ्लप भए । यद्यपी कालो पोथीले विभिन्न फेस्टिवलमा एवार्ड पाएर चर्चामा भने आउन सफल भयो ।
अभिनेता दयाहाङ राई अभिनित पछिल्लो चलचित्र साँइली प्रदर्शन भैरहेको छ । यो चलचित्रको नाफाघाटा केहि दिनमै सार्वजनिक होला । तर यसअघि दयाहाङले कति चलचित्रमा काम गरे ? कति चलचित्र हिट दिए त्यो भने अहिले सहजै रुपमा छुट्टाउन सकिन्छ । पहिलो चलचित्र दासढुंगाबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका दयाहाङले काम गरेका चलचित्रहरुमा लुट, कबड्डी, लुट–२ र वडा नम्वर ६ व्यावसायिक रुपमा सफल चलचित्र मानिन्छ । तर, अरु सबै चलचित्र गफमा मात्रै हिट भए, निर्माताको हातमा सुको पर्न सकेन । दयाहाङ अभिनित नागबेली, लप्पन छप्पन, कर्कश, छड्के, झोले, मिस्टर झोले, सेतो सूर्य, तान्द्रो, झुम्की, लालटिन, नेप्टे, साँघुरो, मुखौटा, संबोधन, बधशाला लगायत ७५ प्रतिशत चलचित्र फ्लप छन् । दयाहाङ अभिनित चलचित्र विर विक्रम औषतको ब्यापार गरेको थियो ।
चर्चा र व्यस्तताको हिसाबले सौगात मल्लको चर्चा व्यापक छ । तर उनको अवस्था दयाहाङको जस्तै छ । कागबेनीबाट चलचित्र यात्रामा निस्किएका सौगातको जिवनमा लुट, लुट २, कवड्डी कवड्डी सफल चलचित्र हुन् । लुटबाट हाकु काले परिचय बनाए, जुन नाम लिने वित्तीकै अहिलेपनि दर्शकले उनलाई राम्रोसँग चिन्छन् । त्यही हाकु काले क्यारेक्टर बाहेक अन्य क्यारेक्टर दर्शकले सम्झनलायक छैनन् । सुनगाभा, श्री ५ अम्बरे, फन्को, पञ्चेबाजा, लाजपुर्जा, झ्यानाकुटी, फाटेको जुत्ता, शब्द, संरक्षण, छड्के, लुकामारी, षडङ्ग, उत्सव, मेरो पैसा खोई, लालपुर्जा, फिटकिरी, दासढुंगा, मुखौटा, सौर्य लगायतका फ्लप चलचित्र समेत उनले दिएका छन् । अफर आएका सबै चलचित्रमा काम गर्ने सौगातको बानीका कारण असफल चलचित्रको लिस्ट बढेको उनि निकट केहि व्यक्तीको भनाई छ । बितेको वर्ष मात्रै सौगातका पाँच चलचित्र प्रदर्शन भए, झ्यानाकुटी, पञ्चेबाजा, संरक्षण, मेरो पैसा खोइ र फाटेको जुत्ता । एकै वर्ष एउटै अभिनेताका यति धेरै फिल्म रिलिज हुनु दंग भइहाल्नुपर्ने कुरा होइन । कथावस्तु र चरित्र छनोटमा चुकेको भन्दै सौगातले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ । तैपनि, ‘पाएजति फिल्म खेल्ने’ रणनीतिबाट पछाडी हट्ने संकेत छैन । यही कारण पनी हुनुपर्छ, हिजोसम्म उनलाई काम गराउन मरिहत्ते गर्ने चलचित्रकर्मी बिस्तारै तर्किदैछन् । पछिल्लो समय मात्रै उनले आफ्नै प्रेमिका श्रृष्टि श्रेष्ठसँग मासु भातमा काम गर्ने बुझिएको छ ।
अभिनय क्षेत्रमा हाम फालेको छोटो समयमै चर्चामा आएका अभिनेता हुन नाजिर हुसेन । होस्टल रिर्टन्समा सहायक भूमिका देखिएका नाजिरले उक्त चलचित्रपछि धेरै चलचित्रमा काम गरे तर खासै सफल चलचित्रको लिस्ट भने लामो बन्न सकेन । गाँठो, जगें, राज्जा रानी, पुन्टे परेड, बीर बिक्रम, तिमीसँग लगायतका चलचित्रमा काम गरेका उनका अधिकासं चलचित्रले पानी समेत माग्न पाएन । उनले काम गरेका चलचत्रिहरुमध्ये होस्टेल रिर्टन्स र विर विक्रम अन्य चलचित्रको तुलनामा केहि चलेका मानिन्छ तर यि चलचित्र हिट भने हुन सकेनन् । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको चचित्र कागजपत्र समेत हलमा २ दिन पनि टिक्न सकेन । नाजिरका चलचित्रको हिसाब–किताब गर्नेहो भने उनि पनि फ्लप फिल्मका हिट कलाकार हुन् ।
अर्पण थापा पछिल्लो समय व्यस्त अभिनेतामा पर्छन् । अर्पणले आफ्नै कारण कुनै हिट चलचित्र दिन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । फिर्के, आधा लभ, व्याच नम्वर १६, लप्पन छप्पन, धन्दा, छड्के, मुखौटा, बधशाला, मौन, अनागत, ह्यामलेट, डाईङ क्याण्डल, सुन्तली आदि चलचित्र नराम्रोसँग चिप्लीए । अर्पणलाई पछिल्लो समय सार्वजनिक चलचित्र अमेरिका व्वाईजबाट केही आशा थियो तर यसले पनि खुसी बनाउन सकेन । उनले निर्देशन गरेका चलचित्र समेत सुपर फ्लप भैरहेका छन् । चलचित्रको व्यापारका हिसाबले अर्पण सुपर फ्लप फिल्मका सुपर हिट चलचित्र हुन् । तर अर्पणलाई नयाँ चलचित्रको प्रस्ताव भने निरन्तर आइरहेको छ । उनको पछिल्लो समय सार्वजनिक चलचित्र सुनकेशरी पनि फ्लप भयो । नयाँ चलचित्र घर र ए मेरो हजुर-३ सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । यि चलचित्रको कारोबार के कस्तो हुने हो त्यो भने पछिनै थाहा होला ।
अनुप विक्रम शाहि
पछिल्लो समयका सवैभन्दा व्यस्त अभिनेतामा पर्छन् अनुप विक्रम शाही । अग्लो लोभलाग्दो हाईट र आकर्षक शरिरका कारण अनुपलाई लिएर चलचित्र वनाउन खोज्ने निर्माताहरु टन्नै छन् । उनी पछिल्ला वर्ष यतिसम्म व्यस्त छन् की उनले गर्ने नियमित ब्यायाम समेत गर्न पाएका छैनन् । उनै अनुप अभिनित सुपर हिट चलचित्र कुन होला भन्ने एकैछिन सोच्नैपर्छ । अनुपले आफै लिड गरेका अधिकांस चलचित्र फ्लप छन् । उनी अभिनित चलचित्र हुर्रे, किङ, रानी, ह“सिया, हाउ फन्नी, सौर्य, मेरो मायाँ तिमीलाई, द«व्य, ठमेल डट कम फ्लप चलचित्र हुन् । विरांगना, जय सम्भु, झमकवहादुर, पुरानो बुलेट पनि फ्लप भए । उनले काम गरेका चलचित्र कमलेको विहे र जायरा सार्वजनिक हुने तयारीमा छन् । कमलेको बिहे प्रदर्शन मिति समेत तोकिएको छैन, निर्देशक प्रशन्न पौडेल अमेरिका गुमनाम छन् भने जायरा भने हिट हुने सम्भाबना छ ।
छोटो समयमै राम्रो पकड जमाउन सक्ने अभिनेता आकाश श्रेष्ठ । उनले काम गरेका चलचित्रको लिस्ट धेरै लामो छैन तर अधिकांस चलचित्र फ्लप छन् । म त तिम्रै हुँ, ब्ल्याक, ड्रिम गर्ल, तिमीसँग, रामकहानी सार्वजनिक भएका छन् भने अर्को एक चलचित्रमा हाल ब्यस्त छन् । यि अभिनेताको फ्लप सुचिमा म त तिम्रै हुँ, ब्ल्याक, ड्रिम गर्ल, तिमीसँग समावेस छन् ।
प्रकाशित मिति २०७५ चैत १८ गते सोमबार ०३:१८